Ehlobo Polyglot. Ezemfundo phesheya.
Abafundi abaningi ukuza UK ulimi ehlobo esikoleni. Akukona nje ukuthi olimini lwesiNgisi livela kwelesiLatini sikhulunywa kwengxenye ezweni: British yethulwa uhlelo "ulimi plus". Ukuthi izingane musa kuphela ukufunda, kodwa futhi ngcono enizithandayo ozithandayo, noma kungaba imidwebo, ukubhukuda, ihhashi ogibele, ukudansa noma lilingise. Rugby School, isibonelo bahlinzeka eminye bahlanganyele lombhoxo kanye nabezindaba, Harrow School - tennis kanye igalofu.
Ukutadisha foreignness izilimi futhi sitadisha phesheya kunezinzuzo esobala, ngoba ingane yakho izoba imvelo, ukuqeqeshwa angaphandle nolimi izobanjelwa futhi izifundo ngaphandle.
Ukuze ufunde ulimi ngaphezulu ngemali ephansi esifundazweni: amanani ezinhloko-dolobha noma amadolobha amanyuvesi efana Oxford no-Cambridge, ngenhla 10-15%.
Ukuze axazulule le ingane kungaba noma umndeni noma kule ndawo ababelala kuyo isikole. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-10 ubudala cishe olufanele kangcono umoya Homely. Intsha ngeke kungcono ukuhlala phezu campus futhi maningi amathuba okuthi zilalele imithetho ezokwenza ebizela othile othisha esikoleni sabo, hhayi "abazali zesikhashana."
Ngakolunye uhlangothi, i-"abazali zesikhashana" kungase kube esikhundleni sicela ukudlalela isikole sonke. EYurophu lehla ngokushesha inani ungathola othisha abakhuluma isiRashiya abanale izifundo ngasese ekhaya, ngenkathi enikeza ibhodi okugcwele uhlelo kwamasiko. Inkokhelo noma ngehora (yokugibela evamile - mayelana 50 euros, ngehora) noma isigaxa-sum yokukhokha (ukukhuluma cishe, konke ngesikhathi esisodwa), okuyinto akukhetha. Uthisha onekhono ukwenza ngasese Asikaze sitshele kusukela emnyango, isimiso sakhe kuyinto njalo futhi ayikwazi ukushintshwa. Ngaphezu kwalokho, amakilasi azinakugcinwa "edeskini", njengoba emnyuziyamu, ipaki noma indawo. Nokho, inani layo likwenza ubone, uhlala ingashintshiwe.
Esikoleni, into izingane kuqala uphiwa isivivinyo, imiphumela lapho zabiwa ngemacembu eziningana, kuye ngokuthi izinga lokuqeqeshwa. Ngo izikhungo kakhulu khona, nomkhawulo inani nabo-abafundi eqenjini. Ngaphezu kwalokho, igumbi nakanjani afake abameleli bezizwe ezihlukahlukene - ngokuvamile akukho abantu lemine. Funa usizo abasebenzi, kumele kuphela ngolimi, owafika ukufundisa. Lokhu kwenziwa ukuze ugcine umntwana isilingo ukuxhumana ngolimi lwabo lwendabuko ukuze bacwiliswa ngokuphelele ulimi.
Amandla ukuqeqeshwa umthwalo kuyahlukahluka, kodwa ngokuvamile ingeqi amahora 22-25 ngesonto. Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungakwazi ukuqasha omunye wothisha esigcwele wokufundisa yangasese.
ukuzijabulisa ejwayelekile - ezemidlalo, imidlalo yengqondo ebhaliwe, disco, ifilimu Ukuhlola, kusihlwa ezinezihloko, izoso, ensimini uhambo. Ikamu ehlobo International Ulimi Academy of Canada ohlelweni abafundi Toronto umenywe joust ephakathi, futhi zifinyelele Niagara Falls, futhi isikole French Atoll Juniors obubodwa liphenduka yaseshashalazini sangempela umculo incendiary nangemidanso.
Intengo ocashunwe kumawebhusayithi ezisemthethweni izikole noma izinkampani umlamuli ngokuvamile zihlanganisa indinganiso ukuqeqeshwa iphakethe kanye zemfundo izinto, indawo yokuhlala, ukudla, ukuzijabulisa kanye nokuvakashela izindawo. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukukhokhela imali, imali visa, ukudluliswa, Izimali zokubhalisa kanye nezimali umshwalense wezokwelapha. Yiqiniso, kuzodingeka ukuba overpay kumasevisi wesisebenzeli umlamuli - isilinganiso ruble 7500-12000. Nokho, uma abazali musa ukukhuluma ngezinye izilimi, ezingeni ehloniphekile, izingxoxo ne isikole ukunikeza ochwepheshe best.
Cishe nje sine eziyinkimbinkimbi futhi cosine
Lo engaba umbuthano
Ukwenyela iqakala: Sifo Nokuselapha